Ukuphonononga i-AUKEY LS02 i-smartwatch kunye neeshaja ze-Aircore 15W | Iindaba zeGajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | 14/07/2021 18:00 | Reviews
Namhlanje sithetha nawe kwi-Androidsis malunga iimveliso ezimbini ezahlukileyo kodwa zinento efanayo. Bavela kumenzi omnye, AUKEY, kwaye umntu ngamnye kwicandelo labo uzama ukubonelela ngokufanayo, imveliso ukusebenza kakuhle ngexabiso elifikelelekayo. I-AUKEY sele ingaphezulu ngokwaneleyo eyaziwa kwicandelo lobuchwepheshe ngokunikela enkulu Uluhlu lwezixhobo kunye neemveliso ze-smartphone.
Ngeli xesha sigxile kwezi zimbini. Sikwazile ukuvavanya ifayile ye- i-smartwatch i-AUKEY LS02 kunye umthwalo ngaphandle kwamacingo I-Aircore 15W. Iimveliso ezimbini ezifikelela kwimarike ukuba ibe yenye enye into kunokungabikho kwamathuba esiwafumana kwimarike.
1 I-AUKEY kunye neemveliso zayo zikulowo msebenzi
2 I-smartwatch ye-LS02
2.1 Uyilo lwe-LS02 smartwatch
3 AUKEY LS02 Iimpawu
4 I-AUKEY Aircore 15W itshaja engenazingcingo
I-AUKEY kunye neemveliso zayo zikulowo msebenzi
Ifemu ye-AUKEY izama ukufezekisa konke abanikelayo iimveliso ezisemgangathweni ngamaxabiso amahle. Sibe nethamsanqa ngokwaneleyo ukuvavanya iimveliso ezininzi ezivela kulo mvelisi, kwaye ngokubanzi sifumene ukugqiba okuhle kunye neempawu zenqanaba. Namhlanje siza kuthetha iimveliso ezimbini ezabelana ngale ntanda yefilosofi.
Xa sithatha isigqibo kwi-smartwatch sithathela ingqalelo izinto ezininzi. Ixabiso, izibonelelo ikunika ntoni kwaye yintoni uyilo enomtsalane kuthi. Sinokuthathela ingqalelo iimeko ezifanayo xa kuthengwa. Yiyo loo nto namhlanje sijonga i i-smartwatch i-AUKEY LS02 nakwitshaja engenazingcingo I-Aircore 15W.
Sijongene nemodeli yewatchwatch iyasebenza njengoko inengqondo. Isixhobo esithi ayitsali ingqalelo Uyilo lwayo lokuba ungabinangqondo. Isenokungabonakali kwisihlahla sakho. Kodwa iyasinika ukusebenza okukhulu kunye nokusebenza ukuthelekisa kwezinye iimodeli ezininzi zamaxabiso aphezulu kakhulu.
Uyilo lwe-LS02 smartwatch
Njengoko besesikuxelele, I-LUK02 ye-AUKEY Yiwotshi yabo bangafuni ukutsala umdla. Ngobungakanani "obuqhelekileyo" ayinazintambo kwiimilo okanye imibala, kodwa oku akuphikisani ne uyilo slim kunye ezintle. Iwatchwatch ene-acI-hasis yentsimbi enobume boxande engwevu mnyama apho ulingana khona 1'4 intshi screen.
Kwi Icala Elilungile ifunyenwe iqhosha lalo kuphela ngemisebenzi eliqela yokusebenza kwayo njengekhaya, okanye ukucima / ukucima.
Kulo ngasemva siyifumene Isantya sentliziyo Iyakwazi ukwenza imilinganiselo eqhubekayo ngelixa sinayo esihlahleni. Imilinganiselo ekhawulezayo nethembekileyo, njengoko sikwazi ukuthelekisa nezinye izixhobo. Into eluncedo ngakumbi xa kuziwa kwimidlalo. Kwaye ngasemva kwayo sifumana Izikhonkwane Magnetic ukutshaja ibhetri.
Mbambe UKEY LS02 kwiwebhusayithi esemthethweni ngesaphulelo se-10%
Ibhanti lelinye lamanqaku akhe abubulumko. Kububanzi ngokobungakanani besikrini, kwi matte mnyama. Kodwa ngochukumiso olumnandi kakhulu kwaye a umgangatho ongaphezulu komndilili ukuba sithelekisa nezinye iimodeli esikhe sazivavanya.
AUKEY LS02 Iimpawu
Lixesha lokuba ujonge yonke into yintoni i-AUKEY LS02 enako ukusinika yona. Kuya kufuneka sigcine engqondweni ukuba sijamelene isixhobo esinokuthi siqwalasele ukonga ukuba sithelekisa nezinye iimodeli. Kodwa le yinto esebenza ngokuxhasa i-LS02 ngokunikwa izibonelelo ezinazo.
Ukuqala ngescreen sakho, a Iphaneli ye-TFT enedayagonal yee-intshi ezi-1,4 kunye kunye Isisombululo se-320 x 320 dpi, ngaphezulu kokwaneleyo kobu bungakanani. Ijongeka intle nakwimeko zokukhanya kwelanga. Ikwanayo useto lwenqanaba lokuqaqamba kwaye sinokukhetha ukuya kuthi ga kwiindidi ezi-4 zokuqaqamba. Into elahlekileyo kwezinye izixhobo ezininzi.
Ixesha lelinye lamandla e-AUKEY LS02. Iya kuhamba ngokumangalisayo nge-smartphone yakho, kwaye akusayi kubakho saziso sokuba ungaphoswa. Ungaqwalasela izaziso ezikrelekrele iminxeba, funda imiyalezo kwiscreen kwaye wenze nokuvula izaziso ezivela kwiintanethi zakho ozithandayo.
Un iqabane elifanelekileyo ukwenza umdlalo owuthandayo ukulawula ukudlala umculo kwakhona esihlahleni sakho. Enye yeenkcukacha ezibalulekileyo kukuba i-AUKEY LS02 Inobunzima obuncinci, awuyi kuqaphela ukuba uyayinxiba. Sifumana ukuya kwi-12 yemidlalo onokujonga ukuba uphathe Ukulawulwa kweekhalori zakho ezisetyenzisiweyo okanye iikhilomitha eziphambili. Beka iinjongo kunye nenkqubela phambili kwaye ufezekise imingeni.
Awuyi kuba nexhala lokuba iwotshi yakho yonakaliswe kukubila okanye ngokutshiza kwamanzi. Iimpawu ze-AUKEY LS02 Isiqinisekiso se-IP68 ukumelana nothuli namanzi. Ukumelana namaqondo obushushu aphakathi kwe-20º kunye no-45º. Thenga i-AUKEY smartwatch ngoku I-LS02 ngesaphulelo kwiwebhusayithi yayo.
Kwaye kwenye yeendlela abasebenzisi abazixabise kakhulu, indlela ubomi bebhetri, ikwalinganisa. I-AUKEY LS02 ibonelela nge- Ukuzimela ukuya kwiintsuku ezingama-20 zokusetyenziswa. Uyakulibala ngokupheleleyo apho ushiye khona itshaja ye-smartwatch. Ngaphandle kwamathandabuzo, ngenxa yezizathu ezininzi, i-AUKEY LS02 yi-smartwatch ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
I-AUKEY Aircore 15W itshaja engenazingcingo
Njengoko besitshilo ekuqaleni kwesi sithuba, i-AUKEY yaziwa kwilizwe liphela ngesixa sezinto ezincedisayo esizenzayo kwizixhobo zethu eziphathwayo. Kwaye singayithetha loo nto Izixhobo zokutshaja zezinye zezona zinto zenziwe kakhulu kwaye ithengiswe kwilizwe jikelele. Kule meko sifumana itshaja engenazingcingo enemagnethi iluncedo njengoko intle.
Sinokukuxelela okuncinci malunga noyilo lwetshaja. Kule meko, kunjalo itshaja ekhethekileyo engenazingcingo ngefomathi yayo nangokungafaniyo okunikwayo. Inobume setyhula kunye nobukhulu obuncinci kunye nobukhulu. Inokuba yinto efanelekileyo njengetshaja yethu nokuba "ithwalwe". Iyakhawuleza, ikhululekile ukuyisebenzisa kwaye ayibizi, ngokuqinisekileyo ukhetho olunomdla. Yithenge ngoku kwiwebhusayithi ye-AUKEY elona xabiso libalaseleyo.
I-AUKEY izisa kuthi umxholo omtsha wetshaja engenazingcingo enemagnethi. I-Aircore 15W yiyo iphefumlelwe ngokucacileyo ngetshaja ezintsha eyilwe yiApple ye-iPhone 12, ebizwa MagSafe. Ayisiyiyo kuphela ukubiza ii-smartphones zethu ezihambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo nayo. Kwakhona Singayisebenzisa ngelixa ibhetri itshaja ngokuyigcina phakathi kwezandla zethu ngaphandle kwetaja eqhawulweyo.
Akhawunti Isiqinisekiso sokutshaja ngaphandle kwamacingo ngokukhawuleza ukuya kuthi ga kwi-15W. Singabiza nasiphi na isixhobo esifanelekileyo njengee-smartphones, ii-headphones okanye ii-smartwatches. Ngaphandle koko, yakhe 1,2 yeemitha ubude, intambo yefomathi yohlobo C ye-USB, yenza ukusetyenziswa kwayo kungonwabi ngelixa siyifakile kumandla okanye izibuko elithile lekhompyuter yethu.
Ukuba sele uthathe isigqibo sokuthenga itshaja engenazingcingo, Fumana i-AUKEY Aircore 15W apha kwiwebhusayithi yakho kwaye wonwabe xa uyisebenzisa.
Itshaja yeAircore 15W ine pIndawo yamagneti ye-otente eya kuthi ibambe isixhobo ngaphandle kokuyiyeka ihambe nokuba siyayihambisa okanye siyibambe ngesandla. Ibalulekile Ukuvela kwezinto kwitshaja zokuqala ezingenazingcingo kunye naye, njengoko sele sitshilo, kuye kwanyanzeleka ukuba sishiye iifowuni zethu ngaphandle kokuzisebenzisa.
Inkcukacha ebalulekileyo ekufuneka igcinwe engqondweni yile Asinakufumana iadaptha yamandla kwibhokisi yeshaja. Kwaye kufuneka siyazi loo nto Ukuze i-Aircore isebenze ngokupheleleyo kwaye ufikelele kwisantya esiphezulu sokutshaja, i-15W siya kufuna iadaptha yenethiwekhi phakathi kwe-18W okanye i-20W.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lwe-AUKEY LS02 smartwatch kunye neshaja yeAircore 15W